Dowladda Somalia maka guulaysan doonta Al shabaab hadii ay qaadaan talaabooyinkaan muhiimka ah? | Calanside
Dowladda Somalia maka guulaysan doonta Al shabaab hadii ay qaadaan talaabooyinkaan muhiimka ah?
Published on June 24, 2017 by amiin · No Comments Views
Sanadkii 2006-da waxaa Soomaaliya ka curtay kooxda Al Shabaab oo iyagu dagaal kula jiray dhamaan dowladihii kumeel gaarka iyo kuwa federalka ahaa ee 11-kii sano ugu danbeeyay dalka kasoo taliyay.
Dhamaan dowladahaan oo kashanaya ciidamada Midowga Africa ayaa ku guulaystay inay gacanta dowladda kusoo celiyaan deegaano badan oo ay horey uga talin jireen kooxda Shabaab walow xiliyada qaar ay ka fuliyeen deeganada dowladda gacanta ku hayso qaraxyo iyo dilal qorsheysan.
Dhamaan xukuumadihii ugu dambeeyay iyo mida haatan jirta ayaa ku mashquulay xakamaynta xasilinta amniga caasimada magaalada Muqdisho oo ay ka dhacaan falal argagax leh oo waxyeelo naf iyo maalba ah ay kasoo gaarto shacabka Soomaaliyeed.
Hadaba qormadaan ayaan kusoo qaadaneena isbabardhig oo ay sameysay Shabalada Calanside.net dhanka Ciidamada Dowladda Federalka iyo Ciidamada kooxda Shabaab.
CIIDAMADDA KOOXDA AL SHABAAB.
Kooxda Al Shabaab ayaa dhanka Ciidamada ee hawl galadeeda u adeegsata afar qayb oo hadii aysan dowladda wax ka qaban aan la heli doonin isbedal dhab ah.
1.Istidhlaac (Sirdoon) qaybtaan ayay Shabaab u adeegsadaan xog aruurinta waxayna ku dhex jiraan kooxdaan sirdoonka Shabaabka ah bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xubnaha dowlada waxayna fududeeyaan dhamaan fariimaha ay ku duulaan qaybaha kale ee Shabaab u qaabilsan dilalka iyo is qarxinta.
2.Amniyaad (Dilaayaal) Kooxdan ayaa ka hawlgasha meelaha ay dowladda u badanyihiin iyo bulshada dhexdeeda waxayna ka shaqeeyaan dilalka qorsheysan iyagoo sirta ka hela kooxda Istidhlaac (Sirdoonka Shabaab)
3.Mutajiraad (Kooxda qaraxyada) Kuwaana waxay ka hawlgalaan goobaha dowladda iyo bulshada dhexdeeda waxay abuuraan dhibaatoyinka qaraxyada waxayna ku xiran yihiin kuwa Istidhlaac (Sirdoonka Shabab).
4.Jabhad (Militari) Kuwaan waa kuwa kaliya ee la dagaalankoodu uu fudud yahay waxayna joogan goobaha ay Shababka maamulaan had iyo jeerana way ku jabaan dagaalada fool ka foolka ah oo ay la galaan ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
CIIDAMADA DOWLADA SOMALIA.
Ciidamada Dowladda Somalia ayaa ah kuwa iyagu haysta agab militari oo dhamaystiran iyo tababaro aad u sareeya waxayna had iyo jeeraba soo af jaraan dhamaan duulaan kasta oo ay kooxda Shabaab goob ku qabsato balse waa xiliga uu khasaare dhaco dolwdda ayay shacabka ka sugayaan masuuliyada kahor taga dhibaatooyinka ku dhacaya.
1.Dowladda waxay ku qasbanaaneysa inay samaysato kooxo sirdoon ah oo u badan dhar cad bulshada ku dhex jira islamarkaana dhaqdhaqaaq xoogan u tagi kara goobaha ay Shabaab maamulan.
2.Ciidamada Dowladda ayaa sidoo kale ay waajib ku tahay inay hagaajiyaan istaraatijida ay kaga hortagayaan gawaarida sida qaraxyada kahor inta aysan is qarxin.
3.Dowladda waxaa looga fadhiga inay xooga saarto oo ay dhisto ciidamo u badan dhar cad oo ka kooban dhalinyarada iyo haweenka si ay u helaan xogagta muhiimka ah oo ay ku sugi karaan amaanka caasimada iyo guud ahaan dalka.